Ninka 2-aad ee Aduunka ugu wiji weyn
Subject: Ninka 2-aad ee Aduunka ugu wiji weyn Tue Jun 08, 2010 10:54 pm
Ninkaan oo ah nin dhalasha ahaan ka soo jeeda dalka India ayaa la sheegaa in uu yahay ninka labaad ee caalamka ugu wiji weyn waxaana la sheegayaa in qiyaasta wijigiisa ay dhantahay ilaa 45kg.
Extended News Ninkaan oo ah nin dhalasha ahaan ka soo jeeda dalka India ayaa la sheegaa in uu yahay ninka labaad ee caalamka ugu wiji weyn waxaana la sheegayaa in qiyaasta wijigiisa ay dhantahay ilaa 45kg.
Mohaner Sing oo ah 4sano jir ayaa la sheegayaa in mudo dheer uu ahaa ninka ugu wiji weyn caalamka ayadoona dhawaan uu ka qaaday Iskoorka wiji weynida nin u dhashay dalka Shiinaha oo noqday ninka ugu wij weyn caalamka.
45-sani jirkaan ayaa la sheegaa in haatan ay heysato xanuuno dhanka wijiga ah waxaana la sheegayaa in xanuunadaasi aawadeed uu haatan dooonayo in uusan mar labaad galin tartanka wijiga oo uu kaalinta 2-baad ka galay aduunka dhanka wiji weynida.
Mr. Sing ayaa haatan leh ilaa 5-caruur oo wiilal iyo gabdho isku jira waxaana la rumeysanyahay in dalka India in uu ka yahay nin mucjiza leh dhanka la dhaqanka dadka sida aad uga jeedaan sawirkiisa.
Dunidaan aan ku noolnahay ayaa sanad waliba waxaa ka jira tartamo caajaib leh oo ay soo abaabulaan dad markaasi is leh amaa wax la kala macaashaa balse taas ayaa waxa ay meesha aysan ka saareyn mucjizooyinka aduunka oo marba marka xigta ay sii kordhayaan.